Ungawenza Kanjani Umsebenzi Owodwa | Martech Zone
Wonke umuntu ukhuluma ngendlela yokwenza imisebenzi eminingi… izolo ngibe nengxoxo noDavid ovela ku- Insiza Yomsebenzi KaBrown County center saxoxa ukwenza umsebenzi owodwa. Lokho ngukuthi… ukuvala ifoni yakho, uhlelo lwakho lokusebenza lwedeskithophu ye-twitter, ukuvala i-imeyili yakho, ukucisha izexwayiso - nokwenza umsebenzi othile wenziwe.
Sineziphazamiso eziningi kakhulu kulezi zinsuku, futhi zinomthelela kwikhwalithi yomsebenzi wethu.
Angiyena umlandeli wemisebenzi eminingi. Abantu engisebenza nabo abavela emisebenzini edlule bazokuqinisekisa iqiniso lokuthi ngingumuntu ophansi. Ngithanda ukuthola ikhona, ngigxile kwengikwenzayo, bese ngiyakwenza. Ngezinye izikhathi babeza kimi baxoxe ngomunye umsebenzi, futhi ngangibabheka njenge-zombie… bengasakhumbuli nokuthi bangibuza umbuzo.
Indodakazi yami iyakuthanda lokhu, vele… lokhu kuvame lapho icela imvume yokwenza izinto engingathi cha kuzo. 🙂
Noma kunjalo… izame! Uma uneBlackberry, yivule ithule (hhayi ukudlidliza) bese uyiphendula phezu kwedeski ukuze ungaboni ubuso bayo bukhanya lapho kufika umyalezo omusha. Uma uya emhlanganweni, shiya ifoni yakho etafuleni lakho bese ugxila emhlanganweni. Uma unegumbi labaphathi labaphathi emhlanganweni, lowo mhlangano ungabiza ibhizinisi lakho izinkulungwane zamaRandi. Beka phansi ifoni bese wenza umsebenzi!
Izame ngesonto elizayo - vimba amahora amabili kuya kwangu-2 ngqo ekhalendeni lakho ngoMsombuluko. Nquma iphrojekthi ozosebenzela kuyo. Vala umnyango wakho, cisha zonke izexwayiso zedeskithophu, bese uqalisa. Uzomangala ukuthi umsebenzi ongakanani ozowufeza.
Tags: amasu e-imeyiliukudayiswa komcimbiOkuxhunyiweMySpaceI-PintrestAma-podcasts
Abathengi Abasakuthengi Ukuphelela
Aug 28, 2009 ngo-8: 50 PM
Ukhohlwe iseluleko esisodwa uma ufuna ukwenza umsebenzi owodwa omuhle… ungazami ukwenza umsebenzi wakho wenziwe kwiNdebe yeBhontshisi!
Aug 29, 2009 ngo-12: 31 PM
Umhlaba we-multi-tasking, Futhi kufanele senze ukuphathwa kwesikhathi ngokwenza imisebenzi eminingana ngasikhathi sinye. Noma kunjalo ngiyabonga ngokwabelana ngemibono yakho.
Aug 30, 2009 ku-1: 16 AM
Iseluleko esihle kakhulu .. Ngicabanga ukuthi ngingahle ngizame lokhu namuhla ngomsebenzi othile wesikole. Kepha ngiyabona ukuthi uvela kuphi u-Emma Adams .. Angikwazi ukufika ekilasini ngaphandle kokuhlola i-blackberry.
Noma kunjalo, okuthunyelwe okuhle ..
Sep 1, 2009 ku-3: 22 AM
UDoug… Bengifuna inqubo enhle yokwenza umsebenzi owodwa futhi ngithole omuhle… Ngisebenzisa inqubo yePomodoro ( http://www.pomodorotechnique.com/ ) lapho ngidinga ukugxila ekwenzeni okuthile futhi ngidinga ukukwenza ngesikhathi esilinganayo. Kubonakala sengathi angiyisebenzisi phakathi nezinsuku ezingama-may ezigcwele imihlangano, kepha uma nginokuningi kokukwenza, kuyindlela engcono kakhulu engiyitholile… Ngokuyinhloko, iPomodoro iyisikhathi semizuzu engama-25 yomsebenzi ngamunye kanye nemizuzu emi-5 lekhefu. 4 pomodoros bese uthatha ikhefu lemizuzu engama-30… Ngikwenze okuningi ngisebenzisa le ndlela….
Sep 8, 2009 ngo-1: 21 PM
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe okuhle, kungenze ngacabanga… bengicima izaziso ku-TweetDeck nakuDigsby ukugcina inani leziphazamiso liphansi ngenkathi ngisebenza.
Sep 14, 2009 ngo-2: 42 PM
Ngiyayithanda indlela osho ngayo ukuthi ufana ne-zombie lapho ugxile emsebenzini owodwa. Ngibhale iposi mayelana Ama-Zombies ne-Art of single-Taskning.